Dhaliisha Guud Ee Maamulka Magaalada Tog-wajaale
Monday June, 18 2018 - 22:07:09
Magaalada wajaale oo ah magaalo ganacsiyeed islamarkaana ku taala marin mihiim ah oo u dhexeeya itoobiya iyo soomaalilaan ayaa ah magaalo bulsho aad u badani ku dhaqantahay.Waxa magaaladan wada degga beelo dhawr ah oo isaaq iyo sabaroonba leh.
Wajaale ayaa baryahan dambe ku talaabsatay horumar ka dib markii gudoomiye ku xigeen loogu magacaabay mursal nuux cusmaan oo ah masuul hawlkar ah isla marakaana hadh iyo habeenba u taagan sidii ay degmadu u horumari lahayd .
Geesta kale waxaa jira caqabado hortaagan horumarka degmada togwajaale , waxaana jira koox isku xidhan islamarkaana ah masuuliyiin dawlada ka tirsan oo fikir
qabiil xambaarsan, masuuliyiinta ayaa ka hawl gala waaxyaha kala duwan ee dawlada sida sirdoonka, dawlada hoose ee degmada togwajaale iyo golaha wasiirada.
Shakhsiyaadka dawlada ku jira ee lagu eedaynayo in ay aaminsanyihiin in magaalda kalidood ay leeyihiin dadka kalena ku cadaadinaya waxaa ka mid ah gudoomiye xaashi , cabdicasiis cabdilahi, jaamac boorama yuusufcali sh khaddar cabdilahi iyo gudooomiyihii hore cabdi saleebaan waxanay ka soo jeedaan beesha reer yoonis.
Dhibaatooyinka ay abuureen masuuliyiintan aan soo sheeganay waxaa ka mid ah in wadooyinka iyo adeegyada kale ee biyogalinta iyo suuqyadaba ay u weeciyaan meelaha ay ku badanytahay beeshoodu.
Masuuliyiintan ayaa la sheegayaa in ay kolba taliya degmada lakeeno ay gacanta ku dhigaan oo uu fikirkooda ku sheqeeyo. Wuxuu xidhiidh wanaagsani ka dhexeeyaa taliye diingale iyo cabdicasiis abdilahai oo ka tirsan laanta socdaalka ee degmada togwajaale.
Geesta kale waxaa shalay ilaa xalay socday shir ay yeelanayeen wasiiro uu hogaaminayo abdiwali sheikhc abdilaahi iyo odayaal ka tirsan reeraha lagu eedaynayo in ay sadbursi ka rabaan degmada togwajaale
Wariye : Khaddar cabdi cabdilaahi
14/06/2018 - 11:56:23